ဇေ ဒီတလော စာရေးမယ် ကြံတိုင်း ဘာမှတွေးလို့ မရပါဘူး ။ ရေးချင်တာက ရတုကဗျာအကြောင်းပါ ။ နောက် လတွေအကြောင်းတွေ သတင်းဘာသာပြန်လေးတွေ အဲလိုရေးချင်တာပါ ။ ဒါပေမဲ့ စရေးဘို့ ပြင်လိုက်တာနဲ့ အိမ်ကလူတွေအကြောင်းဘဲ ပေါ်ပေါ်လာတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ ။ ဇေလိုလူက အဲလိုလူပါ ။ လုပ်ချင်တာတစ်ခု လုပ်တာကတစ်ခု…. ဇေ့မှာ ဆစ်အော့တစ် organ တလုံးရှိတယ် ။ အသံတော်တော်စုံပါတယ် ။ ခုံနဲ့ဘာနဲ့ကျကျနနပါ ၊ တရံတခါမှာ ပက်ပက်စက်စက်သီကြွေးပါတယ် ။ တခါတရံမှာတော့ ဟိုမျောက်မကျ လူမကျ ခြောက်ယောက်က အလှည့်ကျ တက်တက်နှိပ်စက်ပါတယ် ။ ဇေသီချင်းတီးတော့မယ်ဆိုရင် စတွေးထားတာက သီချင်းတပုဒ်ပါ ။ ခုံပေါ်ထိုင်မိလိုက်တာနဲ့ လက်ကတီးချင်တာတီးပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံ ဗုဒ္ဓ၀င်သီချင်းတွေ တစ်ရံတစ်ခါ ကိုမြကြီးတို့ ၊ ကိုမင်းနောင် တို့ ၊ အဲလိုရောက်သွားတတ်ပါတယ် ။ မိုးလေးဘာလေး တစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ကျလာပြီ ဆိုရင်တော့ အလကာင်္ကျော်စွာ ဒေါ်စောမြအေးကြည်ရဲ့ မိုးဒေ၀ါသီချင်းကို ရောက်သွားပါတယ် ။ အစအဆုံးတော့ မရပါဘူး ။ အဲလို တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့ဘဲ သံသရာလည်နေတာကြာပါပြီ ။ အခုလဲစာ ရေးမယ်လုပ်တိုင်း ရေးချင်တာကတခုပါ ။ အခုရေးမလို့လုပ်တုန်း မေမေအကြောင်းဘဲ ခေါင်းထဲ ရောက်လာပါတယ် ။ ကဲရေးလိုက်အုံးမယ် မေမေရေ ခုချိန်ဆို ခေါင်းကြိမ်းနေလောက်ရောပေါ့ ။
ဇေ့တို့မေမေက အေးတယ် ။ တော်တော်လေးအေးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အမှတ်ကြီးတယ် ပြောရမလား ။ သည်းခြေခိုင်တယ် ဆိုရမလား မသိဘူး ။ တခုခုသဘောမတွေ့ရင် ပြောမဆုံးတော့ပါဘူး ။ မနှစ်က ဇေရန်ကုန်ကို ပြန်ပါရော ၊ ပြန်တော့ ဇေလဲဘယ်လို ခံတွင်းလိုက်နေမှန်းမသိဘူး ။ ဟို ပန်းသစ်တော်သီးကို တော်တော့်ကို စားလို့ကောင်းနေတယ် ။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ထင်ပါတယ် sc ဘဏ်အရှေ့ကမှတ်တယ် အဲလမ်းမှာ ပန်းသစ်တော်ကို စတွေ့တာဘဲ ။ တစ်လုံးလေးရာတဲ့ ၅လုံးလောက်ဝယ်လာတယ် ။ နောက်ဆားချိုအမှုန့် တစ်ဗူးဝယ်ထားတယ် ။ ပျင်းတိုင်း ထထစားနေတာ တစ်လုံးနဲ့တစ် ခြမ်းလောက်ကျန်တယ် ။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်တာ ဘယ်သူကခံတွင်းတွေ့ သွားမှန်းမသိပါဘူး ။ လုံးလုံးလျားလျားကို ပျောက်သွားပါတယ် ။ ဒါနဲ့ နောက်နေ့ညနေကျတော့ ပါးကို လှည်းတန်း ဈေးလိုက်ပို့ခိုင်း မေမေနဲ့ လိုက်ရှာကြတာတွေ့ပါပြီ ။ ပန်းသစ်တော်တွေ တစ်လုံး ၅၀၀ ပါ ။ အလုံးတွေက ကြီးလဲကြီးတယ် ။ ဈေးဆစ်တော့ ၅ လုံးကို ၂၀၀၀နဲ့တည့်သွားတယ် ။ ရောင်းတဲ့ကောင်မလေး ကလဲချောတယ် ၊ ၀ယ်တဲ့လူကလဲလန်းတယ် ဆိုတော့ မေမေစစ်သမျှဖြစ်နေတာဘဲ ။ ဒါကနောက်တာပါနော် ။ သူတို့က ကိုက်လို့ရောင်းတာနေမှာပါ ။ ပိုးပန်းပြီး ရောင်းလိုက်တာမဟုတ်နိုင်ပါဘူး ။ တော်ကြာ နေထိုင်ရင်းထိုင်ရင်း အမြင်ကပ်နေမှာစိုးလို့ပါ ။ အဲဒါနဲ့ ဆားချိုဗူးလေး နှစ်ဘူးထပ်ဝယ် ၊ ရသာမွန်တဲ့ တံဆိပ်က ၂၀၀ဘဲပေးရတယ် ။
အိမ်ရောက်တော့ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး ထမင်းစားပြီးတော့ စားလိုက်ကြတာ ဟိုနှစ်ကောင်ရဲ့ လက်ဆိုတာ လေရဲ့လျှင်မြန်မှုနှုန်းနဲ့ သွက်လိုက်တဲ့လက် သစ်သီးပန်းကန်ထဲမှာ မီးပွိုင့်ထားရမလိုတောင်ဖြစ်နေတယ် ။ ပါးကလဲ ကောင်းတယ် မားကလဲ အေးဟယ် ကောင်းလိုက်တာ ဇေရယ်နော် ၊ အေးနေတာဘဲ ၊ ဟုတ်ပ ကိုကိုဇေတော်တယ်ဟေ့ တီထွင် စားသောက်တတ်တယ် ။ နောက်နေ့တွေလဲ စားရအောင်နဲ့ တစ်ယောက်တပေါက် ၀ိုင်းဝန်းမြောက်ပင့်ညာ စားလိုက်ကြတာ ကုန်ရောဆိုပါစို့ ၊
ဒါနဲ့ မေမေ နက်ဖြန်ဈေးသွားရက်မို့လား ။
ထပ်ဝယ်ခဲ့လေ ။ ဇေ့မှာပိုက်ဆံကုန်ပြီ ။
အင်းအင်း မေမေ၀ယ်ကြွေးမယ် ။
ကိုကိုမင်းပိုက်ဆံမေမေ့ ကိုပေးလိုက်အုံးလေ ။ တလုံးလေးရာဟဈေးကြီးတယ် ။ဇေလဲစားအုံးမှာ မင်းတို့စားတာကုန်ပြီ ။
အေး ပါကွာ ငါကြွေးမယ် ၊
ကိုလတ် မင်းပိုက်ဆံထည့်အုံးလေ စားမှာမလား ။
နေပါကွာ မင်းကလဲ သူ့အသီးလဲ တစိတ်လောက်စားရသေးတယ် ၊ ပိုက်ဆံကဇွတ်တောင်းနေတော့တာဘဲ
ဟာ မင်းအများဆုံးစားတာမလား ။ ဇေတောင်နဲနဲစားရသေးတယ် ကုန်ပြီ ပိုက်ဆံကျတော့ မပေးချင်ဘူး ။ သူများဟာကို အလကားစားချင်တယ် ၊ အချောင်သမား ဒီလိုလူတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မကြီးပွားတာ ။
ကဲကွာ နားငြီးတယ် ။ ရော့၁၀၀၀ ၀ယ်လာရင်လဲငါ့အတွက်ချန်ပေးအုံး ။
အေးအဲလိုလုပ်ပါဟ ညီညီညွတ်ညွတ်ပေါ့ ၊ တကယ်တန်း ၂၀၀၀လောက်ပေးသင့်တာ
ဟေ့မပေးနိုင်ဘူးဟေ့ ပြန်ပေးငါ့ပိုက်ဆံ ။
မင်းအသီး စားရတာ အစာတောင်ကြေပါ့မလားမသိဘူး ။
ကဲ ကိုကိုဇေ ပါးပေးမယ် ရော့ ဘယ်လောက်ဝယ်ချင်တာတုန်း ။
မပေးနဲ့ပါးကိုဝယ်ကြွေးမယ် ဇေ၀ယ်တုန်းက ပါးနဲ့ ဇေစားဘို့ဝယ်ထားတာ လူပိုတွေရှုတ်နေတာနဲ့ အချိန်မတန်ဘဲကုန် သွားရတာ ၊
မေမေဘာဖြစ်တာတုန်း ချောင်းဆိုးတာလား ။ ဒီနားမဆိုးနဲ့လေဗျာ ဟိုဘက်လှည့်ဆိုးမှပေါ့…။ ကလုံကလွမ် ပုဂံတွေစောင့်ချပါတယ် ။ သူတို့သားမိသုံးယောက်ကို လူပို တွေလို့ပြောလို့ပါ ၊ ပန်းကန်းဆေးနေရင်း ကနေလှမ်းအော်နေပါသေးတယ်
လျော်မယ်ဟေ့လျော်မယ် ။ လိုက်ဝယ်တုန်းက တစ်ယောက်ထဲသွားဝယ်တာမဟုတ်ဘူး ။ တူတူသွားဝယ်ကြတာ စားခါမှဒီလို ပြောတာတော့ နင်တယ်ဟေ့နင်တယ် ။
အော်မေမေကလဲ ဘာတွေပြောနေတုန်း စိတ်ညစ်တာတအားဘဲ ၊ စိတ်ပျက်ပါ့ ၊ မေမေ့ကိုမပြောပါဘူး ။ ဟိုနှစ်ကောင် ကိုပြောတာပါ ။ သူ့သားတွေကိုပြောလို့ မခံချင်နေတာလေ မသိရင်ခက်မယ် ၊
ဟဲ့အကြီးကောင်တို့ အလတ်ကောင်တို့ သူပြောတဲ့အထဲမှာ မေမေမပါဘူးတဲ့ဟဲ့ နင်တို့ကိုပြောနေတာတဲ့ နက်ဖြန်ပြန်လျော်ပေးလိုက်ကြနော် သူများဝယ် လာတာ စားရတာ လဲတယ်ပြီး မျိုမကျပါဘူး ၊
ဟိုခွေးမသားလေး မင်းကစကားကိုများတယ် ပိုက်ဆံလဲပေးပြီးပြီ
ဟင်းတော်တော့ ဇေသားလေးလာ ပါးတို့စာသွားဖတ်ကြမယ် ။ အဲဒီကိစ္စက အဲနားတွင်မပြီးသေးပါ ၊ နက်ဖြန်ကျတော့ မေမေဈေးသွားပါတယ် ။ လှည်းတန်းဈေးကို အကြီးကောင်ကြီးလိုက်ပို့တယ် ၊ ပြန်လာတော့ မုန့်ဟင်းခါးမှာထားလို့ စောင့်နေတာ ၁၀နာရီကျော်နေပါပြီ ။ ဈေးဝယ်လာတာတွေ နေရာချ ပါးစပ်ကလဲ တဗြစ်တောက်တောက်နဲ့
ကောင်မကစကားပြောတာကိုက ဒေါင့်မကျိုးတာ ၊ ရုပ်ခလေးသနားကမားနဲ့ ၊ တစ်ဈေးလုံး ဒီတစ်ဆိုင်ဘဲရှိလို့ သည်းခံနေတာ ၊ မနေ့ကတောင် လေးရာရသေးတယ် ။ အခု၅၀၀ ဘဲမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတော့ ၊ သူ့ကိုပဲ ထိုင်ရှစ်ခိုးရမလို ဖြစ်နေတယ် ။ မနေ့ကကြတော့ လေးရာရပြီး ဒီနေ့မရတာတော့ တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတယ် ၊
မေမေ ဘာဖြစ်တာလဲ ၊
မမေးနဲ့ ဒီပန်းသစ်တော်ဟာ ကောင်းကျိုးကိုမပေးဘူး ။ မနေ့ကလဲ ခံတွင်းလိုက်လို့ စားလိုက်မိပါတယ် အပြောဆိုခံရတယ် ။ ဒီနေ့လဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် မိုးတောင်မလင်းသေးဘူး အပြောဆိုခံရတယ် ၊
ဟုတ် ဘေးမှာလဲ အကြီးကောင်တယောက် လက်ကွက်တွေ တအားပြနေပါတယ် ။ မေမေစိတ်ဆိုးရင် အဲကောင်တအားကြောက်တာ ၊ အသက်က ၃၂နှစ် စကားတခွန်းမှမဟဘူး ။ ဒီအထုတ် ဟိုရွေ့ ဟိုအထုတ်ဒီရွေ့နဲ့ အလုပ်နဲ့လက်နဲ့ မပျက်ဘဲ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြောင်း သရုပ်ပြနေပါတယ် ။ ခတ်တော့နေပြီ အခုနေရန်ဖြစ်ရင်လဲ ပါးကလဲမရှိ ၊ ဒီကောင်ကြီးကလဲ မေမေဘက်ကဆိုတော့ ရှုံးဘို့က၉၀% ကြိမ်းသေနေပြီ ၊ ဒီတော့ အေးအေးဆေးနေမှ ဖြစ်မယ် ။ လက်ကွက်လေးပြထားမှ
မား ဇေဘာကူရမလဲ ဇေဗိုက်ဆာပြီ ၊
ဟဲ့ဇေ မင်းဟာလေ အလိုက်ကန်းဆိုးတချက်မသိဘူး ။ အမေ ဒီလောက်မောပန်းလာပါလား ၊ ရေလေးတခွက် လောက်တိုက်မယ် သောက်အုံးမလား မမေးဘူး ။ မင်းဗိုက်ဆာတာဘဲ မင်းပြောနေတယ် ၊ ဒီမယ် ဘယ်လောက်ပင်ပန်းသလဲ မနက်ကတည်းက ဈေးသွားရတာ ဟိုဆိုင်က ကောင်မကလဲ ပြောဆိုလွတ်လိုက်သေးတယ် ။ မရဘူးကြိုက်မှဝယ်ဆိုတော့ ငါကဘဲ ထိုင်ကန်တော့ရမလိုဘဲ ၊ သစ်သီးရောင်းစားလို့ပေါ့ ၊ ရွေသာရောင်းရင် အောင်မလေးဟယ် အသဲတွေယား လိုက်တာ ။ ဟဲ့အကြီးကောင်
ဘာမေမေတုန်း မင်းလဲဘာမှအားမကိုးရဘူး ။ ဈေးဝယ်တာ ရှက်စရာလား စစ်စရာရှိတာစစ်ရမှာပေါ့ ဈေးဆိုတာစစ်ဝယ်ရတယ်ဟဲ့ ငါလဲဒီလိုဈေးသည်မျိုး တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး ။ နုတ်သီးကောင်း လျှာပါးတော် သူ့အမေလောက်ရှိတဲ့ အဘွားကြီးကို နိုင်စားလိုက်တာ ၊
မေမေ ဇေဗိုက်တကယ်ဆာနေပြီ မုန့်ဟင်းခါးဘယ်မှာလဲ
ဟဲ့ကောင်လေး မင်းဟာလေ ပြောလေကဲလေပါလား ။ မင်းမှာ မျက်စိမပါဘူးလား ။ လူကြီးပြောတာ မှတ်ထားဟဲ့ ။ ဈေးဝယ်ရင်စစ်ဝယ် ဟိုကောင်ကြီးက သိပ်ရှက်တယ် ဟုတ်လား ။ အေးအေး မင်းတို့ မိန်းမရမှ မင်းတို့ အိမ်ကို တစ်လကိုးသီတင်းလောက် လာနေကြည့်အုံးမယ် ။ ယောကျာင်္းလေးဈေးဆစ်တော့ ဘာဖြစ်တုန်း ။ ဘယ်သူကဈေးဆစ်မှုနဲ့ ဖမ်းမှာတုန်း ၊ ဈေးဆစ်ပြီး ၀ယ်ကျွေးလာလို့ မင်းတို့ ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီမို့လား ။
ဘာအခုမှဟုတ်ကဲ့ပါလဲ ၊ ဈေးဝယ်တုန်းက သူ့အားကိုး ရမလားမှတ်တယ် ၊ မင်းကခေါင်းကြီးငုံ့ထားတော့ ငါသားလေးရှက်နေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ငါအလျှော့ပေးလာတာဟဲ့ ၊ ဟွန်း သမိုင်းဈေးတို့ ကျိုက်ဝိုင်းဈေးတို့မှာ ပေါမှပေါ ၊
မေမေ ဇေတကယ်ဗိုက်ဆာနေပြီနော် တအားကိုဆာနေတာပါ ၊ မုန့်ဖက်ပြုတ်တော့မယ်လေနော် ၊
ဟဲကောင်လေး မင်း ဟာဒီအိမ်မှာအဆိုးဆုံးဘဲ ၊
ဘာလဲဗျာ မပြီးတော့ဘူးလား ဒီကိစ္စက ဆက်ပြောအုံးမှာလား ။
ဟဲ့မအော်နဲ့ လူကြားမကောင်းဘူး ။
ဘာဖြစ်လဲဗျာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကပ်စေးနဲပြီး သွားဆစ်တာကိုး ။ အဲဒါကြောင့် ဈေးဝယ်မလိုက်ချင်တာ သိပ်လေတယ် ။ တော်ပြီးဗျာ မကျွေးတော့နဲ့ အပြင်ထွက် စားမယ် ။
ဇေတော်တော့ သွားမစားချင်လဲ ။
မင်းတို့သားမိကတော့ ကြောင်ခံတွင်းပျက်နဲ့ ဇရက်တောင်ပံကျိုး လိုက်လဲလိုက်တယ် ။ မင်းဘဲ နားငြီးခံ ငါကတော့ မုန့်တစ်ပွဲစားပြီး နားငြီးမခံနိုင်ဘူးဟေ့ ။ ဘယ်သူမှလာမခေါ်နဲ့နော် အကုန်ရိုက်ခွဲပြစ်မှာ ဘာမှတ်နေလဲ စိတ်ကပေါက်လာပြီ ။
ဆူညံ့နေတာဘဲကွာ ဘာဖြစ်တာလဲဟ ။ အလတ်ကောင်အိပ်မှုန်စုံမွားနဲ့ ထလာပါတယ် ။ ဘာတွေလဲဗျာ ဆူညံ့ နေတာဘဲ ၊
အောင်မလေးသားတွေဟဲ့ သားတွေ ကျေးဇူးဆပ်နေကြတာ ၊ ကျေးဇူးဆပ်နေကြတာ ၊ အောင်မလေး ကိုတေဇရဲ့ ….
ဘာဖြစ်တာလဲလုိ့ မေးနေတယ်လေဗျာ ၊ အလတ်ကောင်တိတ်တိတ်နေ အကြီးကောင်က လှမ်းဟန့်တော့ အလတ်ကောင်လဲ တိတ်သွားပါတယ် ။
ဟဲ့အလတ်ကောင်နိုးပလား ။ မင်းတို့ဘ၀က သိပ်ဇိမ်ပါလား ။ သူများတွေ မိုးလင်းဆင်းဆင်းရဲရဲ ဈေးကိုသွားပြန်လာနေပြီ မင်းကခုမှထသလား ။ မင်းတို့ပုံစံကိုလဲ ပြန်ကြည့်ကြအုံး ။ ငါ့မလဲဟယ် တမနက်လုံး အကုသိုလ် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ၀င်နေတယ် ။ မနက်က ဈေးကကောင်မကလဲ ပြောဆိုလွှတ်လိုက်တာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် အပြောခံလာရတယ် ။ အောင်မလေးနော် အသဲယားတာ…။ ငါနှယ် အိမ်ပြန်ရောက်လို့ နားရမလား မှတ်ပါတယ် ၊ သားအငယ်ဆုံးက ပြောဆိုသွားလိုက်တာ ရစရာမရှိဘူး ။ မင်းတို့ အတုမခိုးကျနဲ့နော် ။ ဒီကောင်လေးက တော်တော်မိုက်ရိုင်းနေပြီ ။
ဟဲ့အကြီးကောင် မင်းကမရှက်ပါနဲ့ဟဲ့ ။ နားလည်လား ။ ဟုတ်ကဲ့ မေမေဈေးဆစ်လို့ပိုတဲ့ငွေ ကိုဘယ်သူသုံးသလဲ ။ မေမေဖဲရိုက်ပြစ်သလား ။ ထီထိုးပြစ်သလား ။ မင်းတို့က ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် သိပ်အထင်မကြီးကြပါနဲ့ ။ မင်းနိုင်ငံခြားသွားတော့ ရှိုးမန်းနီးပြရမယ် ဆိုတော့ မေမေမှာ ငွေမရှိလို့ အတိုးတွေနဲ့ ချေးပေးလိုက်ရတာ လေးနှစ်နဲ့မကျေဘူးဟဲ့ ။ အလတ်ကောင် ဗျာ ၊ မင်းကရောဘာထူးသလဲ သိပ်ဘ၀င်မမြင့်ပါနဲ့ မေမေဒီလိုချွေတာနေလို့ မင်းတို့ဒီလို ဥမကွဲသိုက်မပျက် ရရရနေရတယ်မှတ်ပါ ။ မင်းဖေဖေကို အားကိုးချင်သလား ဝေးပါသေးတယ် ။ မင်းတို့ကမင်းဖေဖေလို စတိုင်ကြီးနဲ့ လုပ်ချင်ကြတာ ဈေးဆိုတာဆစ်တန်ဆစ်ရ တယ်ကွဲ့ ။
ဈေးသည်ဆိုတာ အင်မတန်လောဘကြီးကြတာ ၊ ဒီလောက်ငွေနဲ့ မမွဲဘူးဆိုပေမဲ့ နဲယောင်းများယောင်းတောင်းပြည့်ဟဲ့ ။ မင်းတို့အဖေလဲ ဘာထူးတုန်း ။ ဟိုတခါ မကျီးရွက်နုလေး စားချင်တယ်ဆိုတော့ မေမေက ပိုပိုသာသာ ပေါပေါများများစားရပါစေတော့လို့ တစ်ပုံတရာကို သုံးပုံ နှစ်ရာနဲ့ စစ်တာဟဲ့ ၊ အောင်မလေးတော် သူက ကယ်တင်ရှင်ကြီးလုပ်ပြီး မဆစ်ပါနဲ့ကွာ ၊ သူတို့မှာ ဒီလောက်ရဘို့ တော်တော် ခူးရစွတ်ရတာပါနဲ့ ၀င်ပြောတော့ ဈေးသည်က မာန်တက်ပြီးသွားလိုက် တာ တစ်ရာနဲ့တောင် မနဲဝယ်လာရပါလား ။ ဟဲ့အကြီးကောင် မင်းက နားရွတ်မလှုတ်ပါနဲ့ ။ မင်းတို့က မင်းတို့ ဖေဖေကိုပြောလိုက်ရင် ဟိုအကောင်လေးလိုလေးဘဲ ၊ ဘာမှမထူးကြပါဘူး ၊ တပုံစံထဲဘဲ အဲဒါတွေ လိုက်အတုမယူကြပါနဲ့ ၊ မင်းတို့က ငါလိုမေမေလို မိန်းမနဲ့ ရရင်မင်းတို့ချမ်းသာမယ် ၊ မင်းတို့ ဖေဖေလို မိန်းမယူရင် မင်းတို့ဘယ်လောက်ရှာရှာမွဲမှာပါ ။ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်းဟဲ့ ၊ မင်းတို့ တွေ လူတန်းစေ့နေနိုင်တယ်ဆိုတာ ၊ မေမေခုလို မကုန်သင့်တဲ့နေရာ မကုန်အောင် ဈေးဆစ်ဝယ်နေလို့ပါ နားလည်လား ။
ဟဲ့အလတ်ကောင် မင်းဟာလေ အသိတရားမရှိဘူး ။ အထုတ်တွေကိုဖြေး ဖြေးချပါဟဲ့ ။ ပေါက်ကုန်ပါ့မယ် ။ မေမေ့ကို မရွဲ့ပါနဲ့ ။ မင်းတို့ကို မေမေမွေးထားတာပါ ။ မြင်လိုက်တာ နဲ့သိတယ်။ ဒီအိပ်ပေါက်သွားရင် နောက်တအိပ် မကုန်ပါလား ၊ ဥစ္စာဖြိုစဖိုကတဲ့ ကြားဘူးကြရဲ့လား ။ အကြီးကောင်
မဗျာပါနဲ့ နောက်တခါ မင်းမေမေနဲ့ဈေးလိုက်ရင် ဈေးဆစ်တတ်ပါစေ ဘာမှရှက် စရာမလိုဘူးဟဲ့ သူတို့လဲရှုံးရင်မရောင်းပါဘူးဟဲ့ မနက်သစ်သီးသည်လက်မှာ ၀တ်ထားတာတွေ တွေ့တယ်မို့လား မင်းတို့ကြီးဒေါ် မတင်မေတောင် အဲလောက်မ၀တ်နိုင်ပါဘူး ။ ဈေးရောင်းတာ အဲလောက်ဝတ်နိုင်စားနိုင်တာ ကို ကြည့်ပါလား ။ ဘယ်လောက်မြတ်နေတုန်း ၊ မင်းကဘာအားနာစ ရာရှိသလဲ မရှိပါဘူး မရှိသာမရှိတယ် မျက်နှာကဘာကြောင့် ဈေးဝယ်တုန်းကငုံ့ထားရတာတုန်း ဒါမျိုးမရှက်ရဘူးဟဲ့ ။
အလတ်ကောင် မင်းလဲကြပ်ကြပ်သတိနဲ့နေပါ ။ မင်းတို့လုပ်စာကို မေမေတစ်ပြားမှ မစားပါဘူး ။ မေမေ့ပိုက်ဆံနဲ့ မေမေစားသောက်နိုင်ပါတယ် ။ မင်းအကိုကြီးတောင် အစောကြီး ထနိုင်တာ မင်းက ဘာလို့မထနိုင်တာတုန်း ။
အောင်မလေးတော် ဘာကြောင့်တော်က နောက်ကျရတာတုန်း ။
အောင်မလေး ပြော လိုက်ရင်တော့ သားဖတွေသိပ်လိုက်တာဘဲ ။ တပုံစံထဲဘဲ ဟဲ့ အကြီးကောင် ဗျာ ဇေ့ကိုသွားခေါ် မုန့်ဟင်းခါးလာစားလို့ ဟုတ်ကဲ့ ပါအောင်ခေါ်ခဲ့
ဟုတ်မေမေ ။ ဇေတံခါးဖွင့် အုန်းဟ မေမေက မုန့်လာစားတဲ့ ။
မစားဘူးကွာ ငါ့ကိုလာမခေါ်ကြနဲ့နော် ။ မင်းနောက်တခါ ခေါ်ရင် ငါအခန်းတံခါး တွေ ရိုက်ခွဲမှာနော် ၊
ဟာ မလုပ်ပါနဲ့ ညီလေးရာ မေမေက ပါအောင်ခေါ်လာရမယ်တဲ့ သူတအားစိတ်ဆိုးနေတာ သွားစားလိုက်ပါနော် ။
မစားဘူးဆိုကွာ ခွမ်း ခွမ်း ခွမ်း ခွက်သုံးလုံး ဆက်တိုက်ရိုက်ခွဲပေးလိုက်တော့ အကြီးကောင်လဲ အသံမထွက် အိမ်ဘက်အခြမ်းကလဲ အသံမကြားတော့ပါ ။ ဇေလဲဗိုက်ဆာပြီး အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ
ဒုံး ဒုံး ဇေ ပါးပါ တံခါးဖွင့်အုံးကွာ ။ ပါးပြောစရာရှိလို့
ကြေးအိုးဝယ်လာတယ် စားမယ်မလား ။
ဟုတ် စားမယ် ။
မနက်စာ မစားဘူးဆို ဇေ ဘာလို့လဲ မေမေကိုစိတ်ကောက်တာလား ။ အခန်းထဲလဲ ပုဂံတွေကွဲနေပါလား ။
မလုပ်ရဘူးလေ ဇေရယ် မင်းမေမေက စိတ်တွေတအားပူနေတာ ။ ဖေဖေ့ကိုဖုန်းဆက်လို့ ပြန်လာတာ သူက စိတ်ဆိုးလို့ ပြောတာမှမဟုတ်တာ ။ သူကစကားနဲပါတယ် ။ တခါတရံကျတော့လဲ သူကပြောချင်မှာပေါ့ကွာ ။
မဟုတ်ဘူးပါးရဲ့ မဟုတ်တာလေးနဲ့ တစ်အိမ်လုံး မွေနှောက်ပြီးလျှောက် ပြောနေလို့ တင်းတာ ။
မဟုတ်ဘူးဇေရဲ့ မင်းတို့တွေကလိမ်မာတော့ သူကပြောစရာမရှိဘူး ။ ပြောလဲပြောချင်တော့ ဇာတ်ကောင်ရှာရတာ ၊ သူ့ခင်မျာ လှည်းတန်းဈေးကနေ ဇာတ်ကောင်မွေးလာလိုက်တာ အိမ်ရောက်တဲ့ထိ သူ့ဇာတ်ကောင်ကမသေသေးဘူး ။ ဒီဇာတ်ကောင်ကို မင်းမေမေက မသေစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ် ။ ဒါမှလဲသူပြောချင်တာပြောလို့ရမှာလေ ၊ စကားနဲတဲ့လူတွေက အဲလိုဘဲ ကွ ဇေရ
ဒါဆိုဈေးဆစ်တာကရော ပါးကလဲ ပါးမိန်းမဘက်ကဘဲ လိုက်နေတော့တာဘဲ ။
ဟားဟား ဈေးဆစ်တာကလဲ တခြားဟုတ်ပါရိုးလား ဇေရ ။ မင်းမေမေက ဘွားအေ အမျိုးလိုက်တာ ။ မင်းမေမေ ကျောင်းတက်တုန်းက လှည်းတန်းမှာ အဆောင်ရတယ်ဗျ ။ အဲကနေတက်တာ မင်းဘွားဘွားကြီးက လိုက်လာပြီး ချက်ပြုတ်ကြွေးတယ် ။ ဈေးဝယ်ရင် မင်းဖွားဖွားက တောသူဆိုတော့ ဈေးမဆစ်တတ်ဘူး ။ အဲတော့ မင်းမေမေကဆူတာပေါ့ ။ သူက ရန်ကုန်သူတပိုင်းဖြစ်နေတာကိုး ။ အဲကနေ မင်းဘွားဘွား အကျင့်ပါသွားလိုက်တာ ဘာဝယ်ဝယ် စစ်တော့တာဘဲ ၊ ဘယ်လောက်ထိစစ်လဲဆိုရင် မင်းဘွားဘွား လဲမော်လမြိုင်ပြန်ရော မီးရထားလက်မှတ်သွားဝယ်ကြတော့ ဟိုမှာလက်မှတ်မှာရေး ထားတာ ၄ကျပ် ၅၀ပြားဆိုတာ အဲဒါကို မင်းဘွားဘွားက သူသမီးစကားသတိရပြီး ၂ကျပ်ထားပါ သွားစစ်နေလို့ဟ ။ ဟားဟားဟားဟားဟား သားဖနှစ်ယောက် သဘောကျပြီးရီကြပါတယ် ၊ ပြီးတော့ မင်းမေမေဈေးဆစ်တော့လဲ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံတွေ မင်းတို့ရတာဘဲလေ ။ မဟုတ်ဘူးလား ။ ကောင်းပါတယ်ကွ ၊ လာ ဇေမင်းမေမေကို သွားစကားပြောရအောင် ၊ မေမေကတော့ အေးဆေးဘဲ ကိုးရီးယားကားကြည့်နေတယ် ။ မနက်က သူမဟုတ်သလိုဘဲ ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ၊ သူ့ဘဲ အရှေ့မှာမို့ အမှတ်ယူနေတာလားတော့မသိဘူး ၊ ဇေတောင်နုတ်မဆက်ရသေးဘူး
အငယ်ကောင် ထမင်းမစားတော့ဘူးလား ၊ ပန်းသစ်တော်တွေစိပ်ထားတယ် ။ စားလိုက် သိပ်ချိုတာဘဲ ၊ မင်းပါးပါးလဲကြွေးလိုက်နော် မေမေ လိုက်မလုပ်ပေးတော့ဘူး ။ ဒီမှာကားက ဇာတ်သ်ိမ်းနေပြီ ဟူသတည်း……
ဆရာမနှင်းရေ မေမေဟာ အဲလိုကြီးပါ ။ စကားမပြောရင်လဲ မပြောပါဘူး ။ ပြောမိရင်လဲ အကုန်လုံး လျှောက်ပြောပါတယ် ။ မှတ်ဥာဏ်လဲ အင်မတန်ကောင်းပါတယ် ။ သူတစ်ခါပြောရင်လဲ တစ်အိမ်လုံး ရစရာမရှိအောင် ပြောပါတယ် ။ ပြီးသွားရင် သူမဟုတ်သလိုပါဘဲ ဆရာမရော အဲလိုကြီးဘဲလား ။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လို့ သားတွေမွေးခဲ့ရင် အဲလိုကြီး မလုပ်နဲ့နော် ဇေလိုသားက အဲဒီလို အမူအကျင့်ကို တအားမုန်းတယ် ….။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဇေတာရာပါခင်မျာ………။
Posted by နှင်းမိုး at 9:02:00 pm
ပန်းကန် ရေးလိုက် ပုပံရေးလိုက်နဲ့ စာတွေ ပြင်ပါကွဲ့..။
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. မိသားစုတွေမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ သဘောလေးတွေ ပဲနော်.. ကြည်နူးဖို့လည်း ကောင်းသေးတယ်..။
ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
12 June 2010 at 21:51
အသီးရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးက ဇေမပါလို့ မလျှော့တာ နေမှာနော်။ ဟိဟိ။
ဇေ့ မေမေက တော်တော် စကားနည်းတယ်နော်။ လက်လန်ရော။
ဇေကလဲ ဒေါသသိပ်မကြီးပါဘူး။ ခွက် ၃ ခွက် ဓားစာခံ ဖြစ်သွားတာ တခုပဲ။
ဖတ်ရတာ ပြုံးစရာလေး ဇေ။
မိသားစုဘ၀က ဒီလိုပဲ။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်။ အာဃာတတွေ အညှိုးအတေးတွေ မထားကြဘူး။ အဲဒါက မိသားစုရဲ့ အနှစ်သာရပဲ။
ပျော်စရာ မိသားစု အကြောင်းလေးပေါ့